Personal and Workplace Grooming • Brand You Academy
Personal and Workplace Grooming
1. Introduction to Personal and Workplace Grooming
2. Grooming Nightmares & Offensive Grooming Habits
3. Important Hygiene Practices
5. Workplace Grooming
6. Power of Body Language
7. Accessories and Grooming
8. Smart Dressing
9. Skincare & Make Up
လူတစ်ဦးချင်းစီနဲ့ လုပ်ငန်းခွင်ထဲမှာ၊ လူမှုပတ်ဝန်းကျင်မှာ တကိုယ်ရည် သန့်ရှင်းရေး၊ တကိုယ်ရည် သားနားသေသပ်ခြင်း၊ လုပ်ငန်းခွင်သန့်ရှင်းရေးနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ သင်ခန်းစာတွေကို သင်ယူနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
Learning Objectives ဘာတွေသင်ယူရမှာလဲ။
တကိုယ်ရည်သန့်ရှင်းရေး၊ တကိုယ်ရည် သားနားသေသပ်ခြင်းဆိုတာဘာလဲ၊ နာမည်ကောင်းတည်ဆောက်ခြင်းဆိုတာဘာလဲ။ တကိုယ်ရည် သန့်ရှင်းရေးကို သက်ရောက်စေတဲ့အချက်တွေ၊ လုပ်ငန်းခွင်မှာ လက်မခံတဲ့ တကိုယ်ရည် သန့်ရှင်းရေး ပြဿနာတွေ၊ အမျိုးသားနဲ့ အမျိုးသမီးသုံး Accessories လို့ခေါ်တဲ့ လက်ဝတ်လက်စားနဲ့ အသုံးအဆောင်တွေကို ကိုယ်နဲ့ လိုက်ဖက်အောင် ရွေးချယ်ဝယ်ယူ သုံးစွဲဖို့အတွက် အကြံပြုချက်တွေ၊ တစ်ဦးချင်းစီအတွက်ရော လုပ်ငန်းခွင်မှာပါ သားနားသေသပ်ခြင်း အလေ့အကျင့်ကောင်းတွေ တည်ဆောက်ဖို့ အကြံပြုချက်တွေ ပါဝင်ပါတယ်။
လုပ်ငန်းခွင်ဝင်တော့မယ့် လူငယ်တွေ၊ တဖက်လူရဲ့လေးစားယုံကြည်မှုခံချင်တဲ့သူတွေ၊ လူမှုဆက်ဆံရေးမှာ ထိရောက်တဲ့ First Impression တည်ဆောက်ချင်သူတွေ၊ လူတစ်ဦးချင်းစီအနေနဲ့ရော၊ လုပ်ငန်းခွင်ထဲမှာပါ ပြင်ပပုံပန်းသွင်ပြင် ကောင်းမွန်ချင်သူတွေ၊ တကိုယ်ရည် သားနားသေသပ်ခြင်း အလေ့အထကောင်းတွေ တည်ဆောက်ချင်တဲ့သူတွေ တက်ရောက်သင့်ပါတယ်။
2. Grooming Nightmares and Offensive Grooming Habits
9.Skincare and Make Up